Al-Sahabaab oo weerar ku qaaday maqaaxi kutaala xeebta Liido ee Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAl-Sahabaab oo weerar ku qaaday maqaaxi kutaala xeebta Liido ee Muqdisho
Holoca qiiqa qaraxa ka dhacay maqaaxida Banaadir ee Muqdisho. Sawirka: Twitter.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Koox hubaysan ayaa caawa weerartay maqaaxida Banaadir oo kutaala xeebta Liido ee Muqdisho.
Kooxda weerarka qaaday ayaa weerarka u adeegsaday qarax gaari oo ay daba socdeen xabado rasaas ah.
Lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarka, iyadoo wali uu socdo dagaal u dhaxeeya kooxda weerarka geysatay iyo ciidamada amaanka.
Kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas, sida afhayeenka howlgalada Al-Shabaab, Cabdicasiis Abu Muscab uu u sheegay wakaalada wararka Reuters.
June 23, 2016 Maxkamada ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya oo toogasho ku xukuntay ninkii dilay taliyihii nabadsugida gobolka Shabeelada Dhexe
Madaxweynaha dowlada Puntland oo la kulmay raysulwasaare ku xigeenka dalka Turkiga